साउन ३०, २०७४ सोमवार १८:५९:०० प्रकाशित
त्यसैगरी, हालै मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा लिइएको नर्स भर्ना प्रकरण पनि जोडिएर आउँछ। डायलाइसिस ट्रेनिङ गरेका अथवा यस्तै संस्थामा काम गरेकाहरूलाई मात्र भर्ना प्रक्रियामा समावेश गराइने भनिए पनि आफ्ना चिनजानका लागि यो व्यवस्था मिचियो। डायलाइसिस ट्रेनिङ नलिएका समेतलाई परीक्षामा सामेल गराइयो। तर, विगत दुई वर्षदेखि अस्पतालमा भोलिन्टियर खटाएर, लाजगालले हालै मात्र 'सेसन बेसिस'मा काम लगाइएका सजिना देउला लगायतका नर्स छनोटमा परेनन्।
कारण एउटै थियो, उनीहरूका लागि भनिदिने कोही थिएन। म दाबीका साथ भन्छु, उनीहरू परीक्षामा पास नभएका होइनन्, सोर्स लगाइदिने कोही नभएर फेल पारिएका हुन्। यस्तै, केही ट्रेनिङ लिएर अस्पतालमा भोलिन्टियर गर्ने र सेसन बेसिसमा काम गर्नेहरूलाई 'क्राइटेरिया' नपुगेको भन्दै परीक्षामै सामेल नगराई पन्छाइयो। तर, भित्रभित्रै आफ्ना र पहुँच भएकालाई कुनै क्राइटेरिया नै नतोकी परीक्षामा सामेल गराइयो।
यो कस्तो प्रवृत्ति हो? के यस्तै भाँडभैलो र मनोमानी शैलीले नर्सिङ पेसा चल्ने हो र? 'नर्स लिँदा सक्षम र योग्यता पुगेका मध्येबाट उत्कृष्टहरुलाई मात्र लिइनुपर्छ, भनसुन् र सोर्सफोर्स लगाएर हुँदैन' भन्ने आवाज उठाउँदा नै म घेराबन्दीमा परेर निष्कासित हुनुपरेको छ। यसमा मलाई दु:ख छैन।
कायरहरूले मेरो आवाज दबाउन मलाई निकालेका हुन्। तर, डर यस कुरामा छ कि, विधिले नभई व्यक्तिले शासन गर्न थाल्ने हो भने मेरो नर्सिङ पेशा र पेशाकर्मी झन् कति कमजोर अवस्थामा पुग्ला? नर्सिङ पेशासँग जेलिएका यस्ता विकृति र 'अस्पताल प्रशासनको शैली गलत छ' भन्दा निष्कासित हुनुपर्ने विडम्वनाविरुद्ध हाम्रो हकहितका लागि लड्ने संघसंस्था बोल्दैनन् भने तिनका कार्यालय पनि बन्द गरिदिए भएन र?